Guddoomiyaha Fulinta ee Sandals Resorts ayaa guddoonsiiyay Hoggaamiyayaal dhallinyaro ah Abaalmarinta Socdaalka Socdaalka
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Jamaica News Breaking » Guddoomiyaha Fulinta ee Sandals Resorts ayaa guddoonsiiyay Hoggaamiyayaal dhallinyaro ah Abaalmarinta Socdaalka Socdaalka
Awards • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Caribbean • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Jamaica News Breaking • Wararka Raaxada • News • Dadka • jiga • Dalxiiska • Daalacanayo Hadda
Adam Stewart waxaa lagu sharfay samaynta tusaalaha sare ee Warshadaha Safarka
Adam Stewart, oo ah Guddoomiyaha Fulinta ee Sandals Resorts International (SRI), oo ah shirkadda waalidka ee Kariibiyaanka ah ee caanka ah ee caanka ah ee loo yaqaan Sandals Resorts and Resorts Resorts, ayaa aqbalay Abaalmarinta “Pacesetter” ee 2021 Jimcihii, oo ah sannadlaha ah Hoggaamiyayaasha Da’da yar ee Golaha Socdaalka Jameyka. Socdaalka ALLIES Socdaalka, oo ah martigeliyaha munaasabadda, ayaa abaalmarintan qaaliga ah sanad walba u soo bandhigta dhallinyarada raad -raacayaasha ah kuwaas oo mudnaanta siiya daacadnimada iyo u -hibeynta dadka ay hoggaamiyaan oo u adeega, iyagoo dadka kale ku hagaya inay sidaas oo kale sameeyaan.
Stewart wuxuu soo ahaa Guddoomiye Ku -xigeenka SRI muddo ka badan toban sano, isagoo gacan ka geystay horumarinta astaanta Caalamiga ah ee Sandals Resorts.
Wuxuu horseeday u-guuritaankii astaanta oo hadda loo saxeexay Luxury Include® wuxuuna soo bandhigay hoygii ugu horreeyey ee biyaha ee gobolka.
Stewart sidoo kale wuxuu u adeegaa inuu yahay Madaxweynaha qeybta samafalka ee shirkadda, The Sandals Foundation.
Jasiiraddii uu ku soo barbaaray, isaga oo wajahaya dhagaystayaal hoggaamiyeyaal dhallinyaro ah oo isku fikrad ah iyo xirfadlayaal safar oo xamaasad leh, Stewart wuxuu dib u milicsaday waayo-aragnimadiisa u gaarka ah ee noqoshada hoggaamiye, iyo sidoo kale tii aabbihii dhintay, Aasaasaha SRI Gordon “Butch” Stewart, oo kiciyay oo dhiirrigeliyay weynaanta qaybta dalxiiska intii uu noolaa oo dhan. "Waad ku mahadsan tahay fursadan inaad ku xasuusato oo aan kula wadaago maanta oo aan garbihiisa dul istaagay si aan u noqdo oo aan u tixgeliyo casharrada hoggaamineed ee socdaalkaygu i bartay oo sii wadi doona inuu i baro," ayuu yiri Guddoomiyaha Fulinta.
Kahor inta uusan u kicin hoggaanka hadda, Stewart wuxuu soo ahaa Guddoomiye Ku -xigeenka in ka badan toban sano, isagoo gacan ka geystey horumarinta astaanta Caalamiga ah ee Sandals Resorts. Wuxuu kormeeray xilligii ballaarinta weyn; oo ay ku jiraan hadda saddexda xeebood ee Xeebaha ee Jamaica iyo Turks iyo Caicos, afaraad oo dhowaan iman doona St. Vincent iyo Grenadines, iyo sidoo kale shan iyo toban meelood oo Sandals Resorts ee Antigua, Saint Lucia, The Bahamas, Barbados, iyo Grenada, iyada oo lix iyo tobnaad uun lagu dhawaaqay in laga furayo Curacao bisha Abriil 2022. Waxa kale oo uu ka warwareegay u-guuritaanka astaanta oo ay hadda u saxeexday Luxury Include® wuxuuna soo bandhigay deggenaanshaha ugu horreeya ee biyaha ee gobolka. Stewart sidoo kale wuxuu u adeegaa Madaxweynaha garabka samafalka ee shirkadda, The Sandals Foundation, oo ah urur aan macaash doon ahayn oo taageera iskuullada, isbitaallada iyo qoysaska u baahan, isagoo fulinaya ballanqaadkii ahaa in dib loogu celiyo bulshada Kariibiyaanka.
Macluumaad dheeri ah oo ku saabsan summadaha ku guuleystay abaalmarinta Sandals Resorts International, booqo sandals.com iyo xeebaha.com .
Ku saabsan Sandals Resorts International
Sandals Resorts International (SRI) waa shirkadda waalidka u ah qaar ka mid ah sumcadaha safarka ee ugu muuqda oo ay ka mid yihiin Sandals® Resorts, Beaches® Resorts, Grand Pineapple Beach Resort, Fowl Cay Resort iyo Villas -kaaga Jamaican. Waxaa la aasaasay 1981, oo uu soo daahay Gordon “Butch” Stewart, SRI waxay ku taal Montego Bay, Jamaica waxayna mas'uul ka tahay horumarinta miciinka, heerarka adeegga, tababarka xirfadaha iyo hawl-maalmeedka. Wixii macluumaad dheeraad ah, booqo Sandals Resorts International.
Ku saabsan Sandals Foundation
Sandals Foundation waa gacanta samafalka ee Sandals Resorts International (SRI), oo ah hogaamiyaha reerka Caribbean ee hogaamiya qoyska. 501 (c) (3) urur aan macaash doon ahayn ayaa loo abuuray inay sii waddo oo ay ku ballaariso shaqada samafalka ah ee Sandals Resorts International ay qabatay tan iyo markii la aasaasay 1981 si ay door muhiim ah uga qaadato nolosha bulshooyinka ay SRI ka hawlgasho dhammaan Kariibiyaanka . Sandals Foundation waxay maalgelisaa mashaariicda saddex meelood oo muhiim ah: waxbarashada, bulshada iyo deegaanka. Boqolkiiba boqol ka mid ah lacagaha ay ku deeqeen dadweynaha guud ee Sandals Foundation ayaa si toos ah u aada barnaamijyada ka faa'iideysta bulshada Caribbean -ka. Si aad wax badan uga ogaato Sandals Foundation, booqo onlaynka sandalsfoundation.org .
Ku saabsan Socdaalka Socdaalka Bulshada
Socdaalka ALLIES Travel, waa koox shaqsiyadeed oo la soo xulay oo hogaamiya wakaaladaha socdaalka, oo ay la socdaan hadafka taageerida hogaamiyaasha kale ee warshadaha. Waxay ka go'an tahay inay u shaqeeyaan ganacsiyada si daacadnimo leh waxayna ula dhaqmaan iibiyeyaashooda iyo saaxiibbada ganacsi si xushmad leh. Bulshadu waxay higsaneysaa inay midba midka kale ku taageero iskaashiyo gaar ah marka ay sare u qaadaan hoggaanka isla markaana ay si wadajir ah u horumariyaan warshadaha safarka. Xubnaha ALLIES waxay mudnaanta siinayaan barashada, wada shaqaynta iyo wadaaga dhaqamada ugu fiican.
Dan Maaraynta Pimental wuxuu leeyahay,
September 22, 2021 at 09: 59
Hi, qoraalkani waa xog aad muhiim u ah. Wax badan ayaan baranayaa. Runtii aad baan ugu riyaaqay akhrinta qoraalkan ku filan si aan u raadiyo qoritaanka maqaalkan aadka u wanaagsan iyo boostada waxtar leh mahadsanid wadaagista.